FAQs - Raymin Ratidza Zvigadzirwa Co, Ltd.
Chii chatinofanira kuita kushandira pamwe?
Sezvo Akawanda emapepa edu FSDU uye akaomarara echipo bhokisi akagadzirwa-akagadzirwa, kazhinji isu tinotanga kubva dhizaini dhizaini uye saizi yevatengi. Panguva ino, isu tinoda ruzivo rwezvako zvigadzirwa (saizi, huremu, maitiro ekuratidzira) kana titumire iwo mashoma zvigadzirwa esampuli kune dhizaini dhizaini.
Unogona kupa mharidzo?
Ehe, chena sampuro kana ruvara sampu neingi-jeti yekudhinda. Isu tinogadzira dhizaini pakutanga kuti mutengi asimbise, tobva tapa chena yekunyepedzera-sampuro kuti utarise saizi, mhando yemapepa, kugona-kutsigira kugona. Mushure mechimiro chakasimbiswa, isu tinopa mutengi tambo yekufa-yekucheka kuti huve mifananidzo. Kazhinji, mutengi ndiye anogadzira iyo mifananidzo yekuratidzira kana bhokisi rekutakura, kana mutengi achinetseka kana asina dhizaini kuti aite izvi, tinogona kuvabatsira sekureba sekupa kwavo zvakakosha zvekugadzira chinhu kwatiri. Chinotevera kugadzira muyero wemuvara pamberi pekugadzirwa kwemazhinji, kuitira kuti utarise zvemukati zvemukati zvakaiswa nenzira kwayo pabhokisi rekuratidzira uye nebhokisi remhando yepamusoro.
Ndeipi muyenzaniso inotungamira nguva?
Mazuva 1-2 emuchena sampuro uye mazuva 3-4 eruvara sampuro.
Tinogona here kushandisa ink-jet yakadhindwa bepa kuratidza sampuro kana yemhando mapepa kurongedza kuti utarise iwo ruvara mukugadzira kwakawanda?
Kwete, nekuti zvakatosiyana neglue kudhinda mukugadzira kwakawanda, saka ruvara ruchange rwakasiyana kwazvo nemavara ekugadzirwa kwakawanda. Kana iwe uchida kuona kuti vara racho richaratidzika sei mukugadzira kwakawanda, isu tinopa mutengi A3 kana A4 saizi yekudhinda humbowo huri 95% padyo neruvara mukugadzira kwakawanda.
Tinofanira here kubhadhara muyenzaniso?
Ehe. Kazhinji 50 $ yemuenzaniso chena uye 100 $ yemuenzaniso, asi izvi zvinogona kubviswa kubva pahuwandu hwehuwandu hwehurongwa kana odhi yasimbiswa,.
Unotumira sei iwo muyenzaniso?
Isu tinowanzo takura neDHL yemutengi, UPS, FedEx kana TNT account. Kana iwe usina courier iyo courier account, tinogona kuronga kuendesa tichishandisa yedu courier mumiriri sevhisi iyo inodhura zvakanyanya kuderera pane yepamutemo courier, uye iwe unotipa isu yekambani yekuchaja, iyo yatichazobhadhara kune yekeriya mumiriri. Iyi nzira inodhura yakadzika kwazvo asi yakati rebei kuti ugamuchire pasuru yacho.
Ndeipi iyo hodha yekuraira inotungamira nguva?
Iwo mazuva gumi nemaviri kusvika gumi nemaviri kune ese maviri maQQ ekuratidzira uye yemhando mapepa mapepa ekugadzirwa kwakawanda.
Iwe unopa kuunganidza sevhisi yekuratidzira?
Ehe, tinodaro. Mutengi anotumira zvigadzirwa zvavo kwatiri, isu tinobatsira kuunganidza yavo POS kuratidza zvakanaka, kuisa zvigadzirwa uye nekuzadza mabhokisi enzvimbo isina chinhu kana zvichidikanwa. Pakupedzisira Tine rakaoma rakaringana bhokisi rekunze uye ma-V-mabhodhi akarongedza iwo ese ekuratidzira. Ehezve tichabhadharisa shoma yemari yebasa pabasa iri.
Kana mutengi akatarisana nedambudziko rekuunganidza iyo corrugated kuratidza, iwe ungabatsira sei?
Isu tinowanzo funga kugadzira iyo POP inoratidzira zvivakwa nekusangana nyore nyore, uye nekupa chidimbu chebhuku remanyorerwo kune rimwe nerimwe bhokisi rekutakura. Kana mutengi achiri asina zano rekuti vaungane sei, isu tinotora vhidhiyo pfupi kuvaratidza maitiro ekuita nhanho nhanho